Qaramada Midoobay oo ka digtay macluul adag oo ay wajaheyso dunida | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Qaramada Midoobay oo ka digtay macluul adag oo ay wajaheyso dunida
Qaramada Midoobay oo ka digtay macluul adag oo ay wajaheyso dunida
Muqdisho (Halqaran.com) – Qaramada Midoobay ayaa billowday dib u eegidda codsi loogu talagalay si lacago loogu deeqo dalalka ugu saboolsan adduunka, taas oo ay kula dagaallami doonaan cudurka dilaaga ah ee Korona.
Madaxa gargaarka bini’aadanimada ee Qaramada Midoobay, Mark Lowcock ayaa ka digay inay jiraan dalal badan ooay macluul ku sii kordheysa, kuwaas halka ay cunto yaraan baahsani ku habsatay, iyada oo uu dhaqaalahoodii uu saameeyay safmarkan dunida saaqay.
Qaramada Midoobay ayaa waxa ay shegeysaa in 265 milyan oo qof ay dhammaadka sannadkan wajihi karaan macaluul ba’an sababo la xiriira Fayraska Corona, waxayna codsaneysaa hay’addu lacag dhan $10.3 Bilyan oo doolar.
Lacagaha ay Qaramada Midoobay dalbaneyso ayaa waxaa loo adeegsan doonaa dalalka uu dhaqaalahooda cagaha badan ku taagnayn, iyadoo hay’addu ka digtay in haddii aaanan wax ficil ah la qaadin ay dunida mustaqbalka wajihi doonto dhibaatooyin la xiriira horumarka.
Hay’adda ayaa markii hore bishii Maarso ee sanadkan codsatay lacag dhan 2 Bilyan oo ay kula dagaallameyso Fayraska Corona oo saameyn weyn ku yeeshay dalalka ugu faqrisan dunida.